Waa maxay isku xidhka gudbiyaha istuudiyaha iyo sida uu u shaqeeyo - FMUSER
Ku saabsan Xiriirinta STL
Lagula Dardaarmay More>
Isku xirka STL istuudiyaha gudbiyaha (STL link) waa tignoolajiyada gudbinta maqalka wireless-ka ee gaarka ah ee baahinta raadiyaha kaas oo loo qaybin karo xiriiriyeyaasha gudbinta istuudiyaha dhijitaalka ah iyo isku xirka gudbinta istuudiyaha analooga ah.
Iyada oo leh istuudiyo dhamaystiran oo lagu gudbiyo qalabka isku xirka, warfidiyeyaashu waxay awoodaan inay isticmaalaan gudbiyaha STL, qaataha, iyo anteenooyinka STL Link si ay u baahiyaan nuxurkooda raadiyaha muddada dheer.
Boggaan, waxaad ka heli doontaa isku xirka gudbiyaha istuudiyaha ugu raqiisan FMUSER, oo waxaad ka baran doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad wax uga barato noocyada isku xirka istuudiyaha, qiimaha, iwm.
Jeceshahay? La wadaag!
Waa maxay isku xirka gudbinta istuudiyaha STL?
Sidee buu u shaqeeyaa isku xidhka gudbiyaha istuudiyaha?
Noocyada isku xidhka gudbiyaha istuudiyaha - maxay yihiin sax?
Buuxi istuudiyaha si aad u gudbiso Liiska Qalabka Isku xirka
Waa maxay Xaddiga Soo noqnoqoshada Isku xidhka Gudbiyaha?
Kobcinta Ganacsigaaga Baahinta Raadiyaha Hadda
Isku xirka istuudiyaha gudbinta waxaa loola jeedaa isku xirka gudbinta signalada maqalka/muuqaalka ama isku xirka microwave-ka-dhibic ee gudbinta barnaamijyada TV-ga dhijitaalka ah (qaabka ASI ama IP).
Sida isku xirka bar-ilaa-dhibcaha kaas oo ku xiri kara istuudiyaha iyo gudbiyaasha kale ee raadiyaha ama gudbiyaasha TV-ga ee xarun warbaahineed, istuudiyaha xiriiriyaha gudbinta ayaa loo adeegsaday idaacado badan oo FM ah.
Warbaahintu waxay istuudiyaha u adeegsadaan gudbinta qalabka isku xirka sida gudbiyaasha STL iyo isku xirka istuudiyaha gudbiyaha (TSL) si ay u soo celiyaan macluumaadka telemetry.
Sidee buu u shaqeeyaa isku xidhka gudbiyaha istuudiyaha si sax ah?
Calaamadaha maqalka iyo muuqaalka ah ee idaacada ama TV-ga waxaa marka hore duubi doona qalabka ku jira istuudiyaha raadiyaha ka dibna waxaa soo diri doona gudbiyaasha raadiyaha.
Guud ahaan, calaamadahan maqalka iyo muuqaalka ah waxay xaqiijin doonaan shaqada gudbinta ee istuudiyaha si ay ugu gudbiyaan isku xirka 3da siyaabood ee soo socda:
Isticmaalka isku xirka microwave ka ee dhulka
Isticmaal fiber optic ah
Isticmaal xiriirka isgaarsiinta (badanaa goobta gudbinta)
Isku xirka Studio Transmitter waxaa loo qaybin karaa 3 nooc oo waaweyn iyadoo loo eegayo sida ay dhab ahaantii u shaqeyso, taasoo ah:
Xiriiriyaha Dijital Studio Digital
Isku xirka Gudbiyaha Studio Hybrid
Haddii aad rabto inaad ku gudbiso calaamadaha maqalka ah ee tayada sare leh masaafo gaaban, waxaa lagama maarmaan ah inaad barato qaar ka mid ah noocyadan xiriiriyeyaasha istuudiyaha ah.
Waa kan aragtida degdega ah ee noocyada isku xidhka gudbiyaha istuudiyaha ee la sheegay:
#1 Isku xirka Gudbinta Analog Studio
Marka la barbar dhigo isku xidhka gudbiyaha istuudiyaha dhijitaalka ah, isku xidhka gudbiyaha istuudiyaha analoogu waxa uu leeyahay hawlo ka hortag ah oo ka xoog badan.
Talooyin: Qalabka raadiyaha tayada sare leh ayaa inta badan u muuqda qaabka baakadaha.
FMUSER STL10 STL Gudbiyeyaasha, qiimaha ugu fiican, tayada ugu fiican - Wax dheeri ah aqriso
Isku xirka gudbiyaha istuudiyaha analooga ah, gudbiyaasha STL, qaatayaasha STL, anteenooyinka STL, iyo qalabyada qaar ayaa muhiim ah.
Waxaa laga yaabaa inaad hesho mid dhamaystiran liiska analoogga istuudiyaha si loo gudbiyo isku xirka qalab in:
Idaacadaha ama xarumaha telefishinka: tusaale ahaan, idaacadaha gobolka iyo kuwa kor loo qaadayo, idaacadaha iyo telefishinka, iwm.
Istuudiyaha baahinta raadiyaha caadiga ah: gaar ahaan gudbinta calaamadaha maqalka iyo muuqaalka gudaha iyo dibadda
#2 Isku xidhka Gudbiyaha Studio-ga Dijital ah
Istuudiyaha dhijitaalka ah ee isku xirka gudbinta (DSTL) waa hab lagu xusho habka gudbinta shabakada ee gudbinta calaamadaha maqalka iyo muuqaalka.
Waa kan liiska isku xirka qalabka istuudiyaha dhijitaalka ah ee ugu weyn:
Maqal iyo Muuqaal IPTV Encoders
Isku xirka Buundooyinka Gudbiyaha Studio
Dijital ah isku xirka gudbiyaha istuudiyaha sida caadiga ah waxa uu leeyahay dulqaad ka wanaagsan oo calaamadaha iyo luminta signalada hoose ee gudbinta signalada maqalka iyo dhibic-ilaa-dhibcaha.
Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale leedahay sifooyinka fogaanta gudbinta signalada aadka u-qiimaysa iyo aadka u dheer.
Waxaa laga yaabaa inaad hesho mid dhamaystiran liiska ee dhijitaalka ah istuudiyaha si loo gudbiyo isku xirka qalab in:
Goobaha kale ee warbaahintu waxay u baahan yihiin inay dejiyaan oo ay isticmaalaan anteenada PTP FM / TV gudbinta fogaanta.
Si uu kaaga caawiyo inaad si fiican u barato istuudiyaha aan shatiga u haysan si loo gudbiyo isku xirka, halkan waa kan FMUSER ADSTL dijital ah Qalabka isku xirka istuudiyaha 10KM tijaabada fogaanta baahinta:
Studio si loo gudbiyo qalabka lagu tijaabiyay goobta dhabta ah
Wax badan ka baro FMUSER STL isku xirka.
#3 Isku xirka Gudbiyaha Studio-ga Hybrid
Asal ahaan, isku xirka gudbiyaha istuudiyaha isku-dhafka ah waxaa loo qaybin karaa 2 nooc oo waaweyn, kuwaas oo ah:
Nidaamka isku xidhka gudbiyaha istuudiyaha Microwave
Analog & Digital System Link Gudbiyaha Studio
Halkan waxaa ah sida aad ku heli karto faraqa u dhexeeya:
Isku xirka STL-nooca mikrowave
Nidaamka isku xirka microwave-ka ee dhaqameedka waxaa doorbidaya hawl-wadeeno badan oo raadiyaha ama telefishinada waaweyn sababtoo ah waxay leedahay awood gudbinta signalada oo aad u deggan. Nidaamka guud ee isku xirka microwave-ga caadiga ah wuxuu ka kooban yahay laba Anteenooyin Paraboloid ah, gudbiye STL iyo qaataha STL, iyo qaar quudiyayaal ah. Qalabkan baahinta ee u muuqda fudud ayaa si fudud u garan kara gudbinta calaamadaha maqalka ee deggan 50 mayl (80 kiiloomitir).
Nooca Isku Dhafan ee ugu Wanaagsan ee STL | Isku xirka FMUSER STL
Tani sidoo kale waxaa loo yaqaan sida FMUSER STL, waxaa loo aqoonsan yahay isku xirka gudbiyaha istuudiyaha ee aan-dhaqameedka ahayn ee FMUSER. Sixirka nidaamkan isku xirka waa kaas: uma baahna inay codsato shatiga RF ama uma baahna inay ka walwasho shucaaca RF.
Intaa waxaa dheer, sida laga soo xigtay kooxda RF ee FMUSER Broadcast, nidaamkan isku xirka ee ku qalabeysan jiilka shanaad ee tignoolajiyada gudbinta maqalka ayaa xaqiijin kara gudbinta maqalka fog ee fog-ilaa- dhibic ilaa 3000km, oo si fudud u noqon kara buuraha ama dhismayaasha iyo caqabadaha kale ka gudba si loo gudbiyo calaamadaha habka gudbinta. Guji si aad wax badan u barato
Isku xirka FMUSER Studio Gudbinta Qalabka | Waxyaabaha ay tahay inaad ogaato
Guud ahaan, xadhkaha xadhkaha xadhkaha xadhkaha goosha ee istuudiyaha gudbinta waxa lagu cabbiraa GHz, taasi waa, tirada barnaamijyada la kala qaado way badnaan kartaa, tayada maqalka iyo muqaalkuna sidoo kale waa mid aad u wanaagsan.
Tani waa sababta isku xirka isku xirka istuudiyaha loo yaqaan 'UHF link radio'.
Buuxi istuudiyaha si aad u gudbiso Liiska Qalabka Isku xirka ee FMUSER
Istuudiyaha oo dhameystiran si loogu gudbiyo liiska qalabka isku xirka wuxuu ka koobnaan doonaa seddexda qaybood ee lagama maarmaanka ah:
Isku xirka STL wuxuu ka gudbiyaa calaamadaha maqalka iyo muuqaalka ah ee istuudiyaha raadiyaha (sida gudbiyaha badanaa waa gudbiyaasha STL) meel kale sida istuudiyaha raadiyaha / idaacadaha / xarumaha TV-ga ama tas-hiilaadka kale ee kor u kaca ( qaadaha inta badan waa qaataha STL).
#1 STL Yagi Anteenada
Anteenada STL inta badan waa qayb muhiim ah oo ka mid ah qalabka isku xirka gudbinta istuudiyaha ee loo isticmaalo gudbinta calaamadaha maqalka iyo muuqaalka ee istuudiyaha.
Anteenooyinka Isku-xirka Isku-xirka Studio-ga ayaa ah xalka ugu habboon si loo hubiyo gudbinta joogtada ah ee u dhexeysa istuudiyaha iyo xarunta gudbinta, badanaa waxay ka samaysan yihiin aluminium.
Anteenooyinkaan isku xirka waxay daboolayaan taxane VHF iyo UHF ah. Inta jeer ee caynsanaanta guud waa 170-240 MHz, 230-470 MHz, 300-360 MHz, 400/512 MHz, 530 MHz, 790-9610 MHz, 2.4 GHz, iwm.
Talooyin: Aasaaska Anteenada STL | Anteenada Yagi
Guud ahaan, anteenada STL waxaa loo isticmaali karaa kala-bax toosan iyo mid toosan.
Anteenada tayada sare leh iyo qiimaha jabanba, anteenada Yagi waxa ay inta badan ka samaysan tahay xajin bir ah oo aan lahayn waxayna siisaa jihaynta weyn ee baahinta fog.
Anteenada ugu fiican ee Yagi waxay leedahay sifooyinka raadiyaha cajiibka ah ee sahlanaanta isticmaalka, faa'iidada sare, miisaanka fudud, iyo iska caabinta cimilada sare.
Anteenada Yagi. Waxaa laga soo xigtay: Wikipedia
#2 Gudbiyaha STL iyo Qaadaha STL
Inta badan qalabka nidaamka STL ee aad maanta ku aragto suuqa waxa ay ka kooban yihiin gudbiyeyaal, qaatayaal, iyo anteenooyin.
Wariyayaasha iyo soo-qaadayaasha inta badan waxaa lagu iibiyaa qalabyo, gudbiyeyaashan iyo kuwa qaata ayaa inta badan leh muuqaal iyo cabbir isku mid ah waxaana lagu rakibayaa hal armaajo.
Haddii aadan ku xukumi karin inay buuxinayso baahiyahaaga sharraxaadda alaab-qeybiyaha nidaamka STL, markaas qiimuhu wuxuu ahaan doonaa heerkaaga kaliya.
Nasiib wanaag, marka loo eego cilmi baaristayada suuqa isku xirka STL ee hadda, istuudiyaha ugu dambeeya ee gudbinta qiimaha isku xirka wuxuu noqon doonaa ku dhawaad ​​​​3,500 USD in ka badan 10,000 USD, qiimuhu wuu ka duwan yahay noocyada iyo gobollada, isku xirka istuudiyaha analogga ah, qiimuhu had iyo jeer wuu ka sarreeyaa kuwa dhijitaalka ah, waxay ku kacday wax ka yar 4,000 USD si loo helo isku xirka dhijitaalka ah ee STL ugu fiican ee xarunta raadiyaha.
Hagaag, aan ka eegno macluumaad dheeri ah liiska qalabka isku xirka gudbinta istuudiyaha ee soo socda:
Nooca Calaamadaha analog Digital
RF Radio Links Maqalka+Video
Category Qaybta Isku xirka Microwave STL Isku xirka STL Isku xirka STL ( buundada shabakada wireless-ka ku saleysan
Xiriirinta Maqalka Mobilka
(3-5G Mobile Network-ku salaysan)
Heerka Awoodda Aad u sarreeya Dhexdhexaad
(UHF) Kooxda 8GHz - 24GHz 200/300/400MHz 4.8GHz - 6.1GHz
Price ≈1.3W USD 3.5K - 8K USD 3.5K USD <1K USD / sanad (2-station)
Kanaalka Gudbinta signal signal Multi-channel multi-channel
Adabtarka Maqalka Dijital ah
Cable-ka Kala-baxa Maqalka
Output Maqal/Muqaal Maqal/Muqaal Maqal/Muqaal Audio
Inta Badan Lagu Arko Idaacadaha ama saldhigyada telefishinka ee baaxadda weyn (sida idaacadaha gobolka iyo kuwa kor loo qaado, idaacadaha iyo xarumaha telefishinka, iwm.) raadiyaha iyo istuudiyaha TV-ga caadiga ah ee gudaha iyo dibadda maqalka iyo muuqaalka gudbinta calaamadaha Idaacadaha ama xarumaha TV-ga ee u baahan in la dejiyo oo loo isticmaalo anteenooyinka PTP FM/TV si loogu gudbiyo meelaha fogfog Dhanka baahinta raadiyaha, waxaa lagama maarmaan ah in la farsameeyo analoogga iyo maqalka dhijitaalka ah, la beddelo kor-u-qaadista iyo in la sameeyo hab-socod ka soo horjeeda xagga hoose.
Soo saaraha caadiga ah Rohde & Schwarz Baahinta OMB FMUSER DB Broadcast
Cufnaanta macluumaadka sare.
Xallin sax ah oo dheeraad ah.
Sharax sida ugu dhow ee suurtogalka ah qiimaha dhabta ah ee tirada jireed ee dabiiciga ah.
Habaynta calaamadaha Analog waa ka fudud habaynta calaamadaha dhijitaalka ah.
Qiimo jaban, kharash dhexdhexaad ah, oo ku habboon miisaaniyad hoose iyo mid dhexe.
Awood xoog leh oo ka-hortagga faragelinta, ma jirto ururin buuq ah.
Gaar ahaan ku habboon gudbinta tayada sare ee fogaanta fog.
Way fududahay in sir sir lagu sameeyo, ammaan adag, iyo sir sare.
Si fudud loo kaydiyo, loo habeeyo, loona beddelo
Qalabku waa ka yar yahay, fududahay in la isku daro.
Qabo band soo noqnoqda kanaalka ballaaran.
Qiimaha waa mid aad u sarreeya, markaa alaabtu aad bay qaali u tahay.
Awoodda kala-duwanaanshaha ishaadu waa mid aad u liidata oo si fudud dhulku u xannibo.
Way u nugushahay qaylada, saamayntuna waxay noqonaysaa mid aad muhiim u ah iyadoo masaafada sii kordhaysa.
Saamaynta sanqadha ayaa ka dhigi doonta calaamada luminta oo ay adagtahay in dib loo soo celiyo, buuquna waa la kordhin doonaa.
Kordhinta kakanaanta nidaamka waxay u baahan tahay is-dhexgal analoog ah iyo nidaam dhijitaal ah oo aad u adag.
Xaddiga soo noqnoqda ee codsigu waa xaddidan yahay, badi ahaan sababtoo ah xaddidnaanta inta jeer ee muunada beddelka A/D.
Isticmaalka korontada ee nidaamka waa mid aad u weyn. Habka habaynta calaamadaha dhijitaalka ah waxa uu isku xidhaa boqollaal kun ama in ka badan oo transistor ah, halka nidaamka habaynta calaamadaha analooga uu isticmaalo tiro badan oo ah aaladaha dadban sida resistors, capacitors, iyo inductors. Iska horimaadkan ayaa noqon doona mid caan ah marka kakanaanta nidaamka uu kordho.
Taas macnaheedu waa xaalad kasta oo aad u baahan tahay qalab tayo sare leh oo isku xirka raadiyaha STL, waxaad ka heli kartaa mid Amazon ama goobo kale, laakiin waxaad ku bixin doontaa lacag badan taas.
Haddaba sidee ku heli kartaa raadiyahaaga isku xirka gudbiyaha istuudiyaha ugu jaban? Waa kuwan qaar ka mid ah xiriiriyeyaasha STL ee ugu wanaagsan ee iibka ah, noocyada ikhtiyaarka ah ee microwave ilaa dhijitaalka ah, hubi doorashooyinkan miisaaniyada hadda:
Dalab gaar ah: FMUSER ADSTL
Isku xirka gudbiyaha istuudiyaha ikhtiyaariga ah ee noocyada dhijitaalka ah ilaa noocyada analoogga:
4 ilaa 1 5.8G Digital STL Link
Tilmaan ilaa Bar 5.8G Digital STL Link
Tilmaan ilaa Bar 5.8G Dijital STL isku xirka
Tilmaan ilaa Barta 5.8G Digital STL
Gudbiyaha STL & Qaadaha STL & Anteenada STL
Gudbiyaha STL & Qaadaha STL
Isku xirka gudbiyaha istuudiyaha Analog sida isku xirka gudbiyaha istuudiyaha microwave-ka iyo xiriirinta gudbiyaha istuudiyaha caadiga ah, iyaga Isku xidhka Gudbiyaha istuudiyaha inta jeer ee inta jeer waa:
8GHz - 24GHz iyo 200/300/400MHz, siday u kala horreeyaan.
Iyo isku xirka gudbiyaha istuudiyaha dhijitaalka ah sida Xiriiriyaha Dijital Studio Digital iyo Xiriirinta Maqalka Mobilka, Studio-gooda Isku xirka Soo noqnoqoshada Gudbinta waa:
Dabcan, qiimaha u dhigma ee isku xidhka gudbiyaha istuudiyaha la isku daray waa mid ballaadhan, laakiin haddii ay jirto miisaaniyad ku filan, isku xidhka gudbiyaha istuudiyaha oo la ekaysiiyay waa doorasho aad loo qalmo.
S: Istuudiyaha si loo gudbiyo nidaamka isku xirka sharci ma yahay mise maaha?
Haa, wadamada intooda badan, isku xirka istuudiyaha gudbiyaha waa sharci. Wadamada qaar, sharciga qaar ayaa xanibay isku xirka istuudiyaha gudbiyaha, laakiin wadamada intooda badan, xor ayaad u tahay inaad u isticmaasho istuudiyaha si aad u gudbiso qalabka isku xirka.
Wadamada ay suurtagal tahay inay iibsadaan istuudiyahayaga si ay u gudbiyaan qalabka isku xirka
Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua iyo Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, The Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia iyo Herzegovina, Botswana , Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Democratic Republic of the, Congo, Republic of the Costa Rica , Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Qubrus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, East Timor (Timor-Leste), Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel , Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea, North, Korea, South, Kosovo, Kuwait,Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lubnaan, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Dawlada Dhexe ee Moldova, Monaco , Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar (Burma), Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saint Kitts iyo Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent iyo Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome iyo Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sudan, South, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad iyo Tobago , Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab E mirates, United Kingdom, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vatican City, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
S: Sidee bay warfidiyeenadu ugu xidhaan istuudiyaha iyo gudbiyaha?
Hagaag, waxay ku xidhaan istuudiyaha iyo gudbiyaha iyada oo loo marayo nidaamka isku xidhka isku xidhka gudbiyaha oo dhan. Ka dib markii ay idaacadaha iibsadaan oo rakibaan istuudiyaha si ay u gudbiyaan qalabka isku xirka, waxay u soo diraan calaamadaha maqalka iyo muuqaalka ee xarunta baahinta ama TV-ga (sida caadiga ah calaamada ay gudbiso gudbiyaha istuudiyaha istuudiyaha iyo anteenada Iskuxirka Gudbinta Yagi Studio oo ah side) baahinta gudbiyaha ama gudbiyaha TV-ga (badanaa waxaa hela soo dhaweynta istuudiyaha gudbiyaha) meel kale (badanaa raadiyaha kale ama xarumaha TV-ga).
S: Sidee loo amaahan karaa nidaamka isku xirka gudbiyaha istuudiyaha?
FMUSER waxay ku siinaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee istuudiyaha si loo gudbiyo nidaamka isku xirka (ay ku jiraan sawiro iyo muuqaalo iyo sidoo kale sharaxaad), macluumaadkanina waa bilaash. Waxaad sidoo kale ku dhaafi kartaa faallooyinkaaga hoos, waxaan kuugu jawaabi doonaa ASAP.
S: Waa maxay qiimaha istuudiyaha si uu u gudbiyo isku xirka?
Qiimaha istuudiyaha si loogu gudbiyo isku xirka soo saaraha iyo soo saaraha isku xirka Studio Transmitter kasta waa ka duwan yahay. Haddii aad haysato miisaaniyad kugu filan oo aad rabto inaad gudbiso calaamadaha maqalka iyo muuqaalka tayada sare leh, waxaad tixgelin kartaa inaad ka iibsato Rohde & Schwarz. Qiimuhu waa ilaa 1.3W USD. Haddii aadan haysan miisaaniyad kugu filan, laakiin aad rabto inaad gudbiso calaamadaha maqalka iyo muuqaalka tayada sare leh, waxaad ka fiirsan kartaa FMUSER istuudiyaha dhijitaalka ah si aad isku xirto gudbiyaha, qiimahoodu waa kaliya ilaa 3K USD.
S: Waa maxay xargaha mikrowave ee shatiga leh ee sida caadiga ah loo isticmaalo?
In ka badan 40GHz waa la oggol yahay gudaha Mareykanka. Sida laga soo xigtay FCC - guji si aad u booqato, Tiknoolajiyada hore waxay xaddidday hawlgallada nidaamyadan raadiyaha spectrum ee baaxadda 1 GHz; laakiin horumarinta tignoolajiyada gobolka adag awgeed, nidaamyada ganacsigu waxa ay isu gudbiyaan ilaa 90 GHz. Aqoonsiga isbeddelladan, Komishanku wuxuu ansixiyay xeerar u oggolaanaya isticmaalka spectrum ka sarreeya 40 GHz (eeg Millimeter Wave 70-80-90 GHz).
Si kastaba ha ahaatee, waddan kastaa ma raaco mabda'an, FMUSER waxay kuu soo jeedinaysaa inaad hubiso kooxda raadiyaha shatiga leh ee waddankaaga haddii ay dhacdo baahinta sharci-darrada ah ee shakhsi ahaaneed.
Wadaaggan, waxaan si cad u baraneynaa waxa istuudiyaha gudbiyaha ah iyo sida uu u shaqeeyo, oo lagu daray noocyada isku xirka STL ee kala duwan iyo istuudiyaha la xiriira gudbinta qalabka isku xirka.
Si kastaba ha ahaatee, helitaanka isku xirka istuudiyaha ugu jaban ee idaacadaha ma fududa, waxaan ula jeedaa, kuwa dhabta ah ee tayada sare leh.
Nasiib wanaag, sida mid ka mid ah soo-saareyaasha qalabka idaacadaha hal-joos ee ugu wanaagsan, FMUSER waxay awood u leedahay inay bixiso dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka isku xirka istuudiyaha, la xidhiidh khabiirkayaga, oo hel xalalka furaha raadiyaha ee aad u baahan tahay.
8 Waxyood Oo Aanu Ka Maqnaan Karin Ku Saabsan Tiyaatarka Filimada Lagu Wado
Waa maxay Qalabka Warbaahineed ee Qolka Rack-ka ee Radio-ga ee "Waa in La Haysto"?
Maxaa la ogaadaa ka hor inta aanad iibsan gudbinta FM-ka?